Our favorite Anker Bluetooth headphones inodhura $ 22 chete panguva ino - BGR - TELES RELAY
HOME » Deals »Zvatinoda zveAnker Bluetooth headphones zvinodhura $ 22 chete panguva ino - BGR
Our favorite Anker Bluetooth headphones inodhura $ 22 chete panguva ino - BGR
Kunyange pakutengesa, helmete Anker SoundBuds Slim Wireless Workout inopa zvinhu zvikuru pamutengo muduku. Vanonzwika zvakanaka, vane hutongi hwemaawa e10, vanonakidza uye vanofara, havasi kuneta nenzeve, kunyange mushure memaawa ekuteerera. Iko IPX7 yakavimbiswa uye saka yakakwanisa kudzidziswa. Zvinomiririra mari inokosha yemari madhora 29, asi ikozvino ivo vanodarika madhora e21,99 kuAmazon.
Heino zvinhu zvakakosha zve peji yemiti:
Teerera Up: kunyatsogadzirisa zvakakwana 6mm drivers, inoshandiswa kuburikidza neBluetooth 5, inunura simba, kusvetuka-musina inzwi.
Tsvaga chiyero chako: A lightweight design ne customizable eartips uye hoko dzakapfigira zvakachengeteka zvakachengeteka uye zvakanyatsokodzera.
Kutungamira Nguva Yokutanga: teerera kusvika ku 10 imwe chete maawa ekubhadhara. Yakakwana jisi kuti uchiteerera zuva rako
IPX7 Waterproof: Superior kudzivirira zvinodhaka zvakadai semvura, sweat uye mvura.
Chii chiri mubhokisi: SoundBuds Slim, XS / S / M / L Ear Tips, S / M / L Ear Hooks, Clip Fit, Shirt Clip, Micro USB Cable, Travel Pouch, Gwaro Rekugamuchira, Ishamwari Yedu uye pasina kunyunyuta panguva ye18 mwedzi.
tevera @Bkuueals pa Twitter kuchengeta
Kuti udzidze zvakawanda pamusoro pezvipo zvedu zvakabhadharwa uye mikana yedu yemari inobhadharwa, tapota tumira email kune inotsigirwa ne bb.com
Zviri mubhuku reBGR Deals rinozvimiririra neHeditor uye Advertising, uye BGR inogona kupiwa mutengo wekutenga kunoitwa kuburikidza nemabhuku edu.
Uyu ndiwo mukana wako wekupedzisira kusvikira Zuva Rokuwana $ 25 Moto Moto Stick kana 35 $ 4K Moto Moto Stick - BGR
TSA Approved Luggage Lock neFingerprint Reader Inodzivirira Bhizimisi Rako Pasina Keys uye Combo - BGR